“Ma iloobi doono waxa uu nagu sameeyay Messi TODODBO sano kahor”__ Rio Ferdinand – Gool FM
“Ma iloobi doono waxa uu nagu sameeyay Messi TODODBO sano kahor”__ Rio Ferdinand
(Champions League) 04 Okt 2018. Lionel Messi ayaa bandhig wanaagan ka sameeyay kulankii Tottenham ee Champions League taasoo sababtay in kabtankii hore ee kooxda Manchester United Rio Ferdinand uu ka helo dareen sharafeed.
Rio Ferdinand ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay in laacibka reer Argantina uu bandhig cajiib ee heersare ah ka sameeyay kulankii Tottenham Hotspur ee garoonka Wembley.
Kabtankii hore ee kooxda Manchester United ayaa dhinaca kale sheegay inuusan iloobi doonin waxa uu ka sameeyay garoonka Wembley 7 sano ka hor.
“Lionel Mesii wuxuu shuuday labo kubadood waxayna kaga dhacday birta, si uu u dhaliyo gool, ma beeninayo in uu u wanaagsan yahay ilaa iyo heerkan”.
“Xili kasta waxaan ka hadalnaa Messi iyo waxa uu kubada cagta ka sameenayo, laakiin kulankan wuxuu ahaa Messi kan ugu horeeyay ee xitaa kubad la’aan difaac tamayay isla markaana si wyen u dagaalamayay wuxuu sameeyay wax walba”.
“Ma iloobi doono inta ka dhiman nolosheyda, waxa uu nagu sameeyay finalkii Champions League ee ka dhacay garoonka Wembley”.
“Waxaan dareemayaa inaan ku faraxsanahay inaan joogay isla garoonka uu ku sugnaa Messi, waxaan caruurteyda u sheegi doonaa bari, inuu dareensanaa in Messi uu kubada cagta u dheelayay sida Playstation-k oo kale”.
Dekadda vs Benaadir iyo .......(Kulamada Maanta la ciyaarayo Koobka Jeneraal Daa’uud)